Iindaba - Indawo yaseWenchuan County Yanmenguan yenkonzo yesitishi sokutshaja i-DC eqalisa ukusebenza
Isitishi sokutshaja se-AC
Isitishi sokutshaja seDC
Indawo ye-Wenchuan County Yanmenguan yenkonzo yokutshaja i-DC eqalisa ukusebenza
Nge-1 kaSeptemba 2021, isikhululo sokutshaja e-Yanmenguan Comprehensive Service Area ye-Wenchuan County saqala ukusebenza, esisikhululo sokuqala sokutshaja esakhiwe saza saqala ukusebenza yi-Aba Power Supply Company ye-State Grid yase China. Isikhululo sokutshaja sinendawo yokutshaja eyi-5 DC, nganye ixhotyiswe ngemipu e-2 yokutshaja ngamandla alinganisiweyo e-120kW (imveliso ye-60kW yompu ngamnye), enokubonelela ngenkonzo yokutshaja izithuthi zombane ezili-10 ngaxeshanye. Amanqaku amahlanu okutshaja ngokukhawuleza onke aveliswa yiSichuan Wei Yu Group, Weeyu, ngohlobo lwe-ODM ye-Aba Power Supply Inkampani ye-State Grid Corporation yase China.
"Ingabiza i-kWh ezimbini ngomzuzu, kwaye ithatha kuphela malunga nemizuzu engama-25 xa imoto ihlawulisa i-50 kWh, nesasebenza kakuhle kakhulu." Umnumzana Deng Chuanjiang, usekela mphathi jikelele weNkampani yeGridi yaMandla yaBasebenzi yaBantu, wazise ukuba ukugqitywa nokusebenza kwezikhululo zokutshaja kwindawo yeYanmenguan Comprehensive service yaphelisa imbali yokungabikho kwesitishi sezitishi ezikhawulezayo e-Aba Prefecture, kwaye isombulule ingxaki ukutshaja ngokukhawuleza kwabanini bamandla amatsha.
Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba i-Wenchuan County ibekwe kwindawo ephezulu kakhulu ene-avareji yokuphakama kweemitha ezingama-3160. Ulwakhiwo lwezitishi zokutshaja ze-dc kubude obunje ngaphandle kokuchaphazeleka okukhulu kwisantya sokutshaja kuyaqhubeka kungqina ukuba umbane we-NIO ungumnini kwitekhnoloji yemveliso ekhokelayo kunye nolawulo lomgangatho.
Ukusukela ngoMeyi kulo nyaka, iGridi kaRhulumente yase China iye yakha ngokulandelelana inani leemfumba zokutshaja e-Aba Prefecture kwaye yafikelela kubunzulu bokusebenzisana ne-Sichuan Weiyu Electric Co, LTD. Okwangoku, iluphu encinci yethoba kwi-wenchuan, izikhululo zokutshaja iingoma zinokwakhiwa, zinakho ukuhlangana ngokukhawuleza kunye nezikhululo zokutshaja ze-jiuzhaigou Hilton ziyakhiwa, ezakhiwa ngoSeptemba kulindeleke ukuba ziqale ukusebenza, maoxian inqwaba yokutshaja kwakhona kukukhawulezisa ulwakhiwo, emva kokugqitywa kokutshaja ukusuka ku-chengdu ukuya kwi-jiuzhaigou kuya kuphunyezwa ngokupheleleyo.
Umnumzana Deng Chuanjiang uthe emva kokugqitywa kwesixeko, isiphaluka kunye neendawo ezibalulekileyo ezibukekayo, iisayithi ezintle ezibiza ukwakhiwa kwewebhusayithi, inkampani yeGridi Aba yokubonelela ngombane iya kusekelwa kwimeko eyiyo ukomeleza indawo yokutshaja, kwaye uzabalaze ukucwangcisa ukubiza isikhululo esikwiikhilomitha ezingama-70 ukuya kuma-80, ukusombulula ingxaki yokutshaja kwesithuthi esitsha.
Kwinkqubo yokutshaja, umnini kufuneka askene ikhowudi yokukhuphela i-APP kwaye asebenze ngokweengcebiso ezikwi-APP kunye nokutshaja inqwaba yokugqiba umsebenzi wokutshaja. Ngokubanzi, kuxabisa malunga ne-60 ukuya kwi-70 yuan ukuba igcwele iiyure ezingama-50 zeeyure zombane. Inokubaleka i-400 ukuya kwi-500 yeekhilomitha, kwaye kuphela yi-0.1 ukuya kwi-0.2 yuan ngekhilomitha. Xa kuthelekiswa neendleko ezingaphezu kwe-0.6 yuan ngekhilomitha yeemoto zepetroli eziqhelekileyo, iimoto zamandla amatsha zinokonga malunga ne-0.5 yuan ngekhilomitha.
Ixesha Post: Sep-07-2021
Indlu ye-Ev, Ukutshaja ipetroli Ev, Isikhululo se-Ev Charge, Izikhululo zeEv Charge, Ukutshaja iiMoto zombane, Isitishi sokutshaja i-Ev,